Okuhamba phambili kwe-Tyrwhitt Rosebank - I-Airbnb
Okuhamba phambili kwe-Tyrwhitt Rosebank
Rosebank, Johannesburg, iNingizimu Afrika
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Poonam
U-Poonam Ungumbungazi ovelele
Ifulethi lami lisenkabeni yedolobha laseRosebank Precinct. Umhlobiso wesimanje kodwa othokomele wefulethi ngobuningi bokukhanya kwemvelo endaweni yokuhlala kudala isimo esivuselelayo somzimba nengqondo yakho. Ifulethi ligcwele izinto zikagesi ezihlukene, i-Fiber WiFi yamahhala engenamkhawulo, itiye nekhofi nokunye okuningi ukuze wenze ukuhlala kwakho kukhumbuleke. Ukuqinisekisa ukuthi zonke izinyathelo zokuphepha ziyathathwa, ifulethi liyahlanzwa ngemuva kokusetshenziswa.
Ifulethi litholakala ngaphakathi kwesakhiwo iTyrwhitt okuyintuthuko entsha ehlonishwayo enhliziyweni yeRosebank. Ifulethi linendawo yangasese ethandekayo engaphandle lapho ungahlala khona uphumule kanye nezokuzijabulisa ezihamba phambili zedolobha nezokudlela khona ekhoneni, ukuhlala kwakho kuzoba okukhethekile ngaphakathi kwefulethi njengoba kuzoba ngaphandle.
Ibhilidi lilawule ukufinyelela ukusuka ku-Tyrwhitt Avenue futhi leli fulethi liza nezindawo zokupaka ezingaphansi komhlaba ezi-2 ezitholakala kalula, ezivikelekile uma ufisa ukupaka imoto yakho. Indawo enkulu yokufinyelela phansi ngamakheshi aseduze nendawo yokwamukela izivakashi kodwa kukhona nekheshi elisuka ngqo endaweni yokupaka engaphansi.
Ifulethi lisanda kufakwa futhi ligcinwe kukhumbula izidingo zabo bonke abahambi besimanje.
1) Igumbi lokuhlala
Igumbi lokuphumula liqokwe ngefenisha umbala wayo kanye nomklamo ovusa umuzwa wokuzola nokuphumula. Usofa omkhulu othokomele egumbini lokuhlala lenza ithuba elihle lokuhlala ubuye ufunde incwadi ngokumelene nokukhanya kwemvelo okukhanyisa indlu.
Kukhona i-Samsung Smart HDTV exhunywe ku-Netflix kanye ne-YouTube ukuqinisekisa ukuthi unokuzijabulisa okungcono kakhulu ngesivinini esikhulu. Ifulethi linokufinyelela kwe-inthanethi kwe-WIFI okungenamkhawulo kuyo yonke indawo ukuze uhlale uxhumeke kahle ngesikhathi uhlala.
2) Ikhishi nendawo yokudlela
Ikhishi lesimanje lifakwe phezulu kwezinto zikagesi ezihlukene ezivela kwa-Bosch kanye ne-Samsung phakathi kwezinye izinhlobo ezinkulu zokuqinisekisa ukuthi zonke izidingo zakho zibhekelelwa okuhlanganisa ihhavini, ihhavini, isiqandisi, iwasha nokomisa kanye ne-microwave.
Ikhishi ligcwele izinto zokusika, amapuleti nezibuko ukuze ungakhathazeki nganoma yini.
Indawo yokudlela inetafula eliyingilazi eliyindilinga elithandekayo elihlalisa umndeni kalula. Uzothola nendawo yokubeka iwayini enokukhethwa kwamawayini aseNingizimu Afrika ongawajabulela ngesikhathi sokuvakasha kwakho uma uthanda.
3) Amakamelo okulala
Lapho ngihamba, into eyodwa ebaluleke kakhulu kimi ukuthi ngikwazi ukulala emibhedeni ethokomele. Ngiye ngaqinisekisa ukuthi ubusuku bonke obuchitha kuleli fulethi bugcwele ubuthongo obuhle. Womabili amagumbi okulala anombhede kasayizi wendlovukazi onomatilasi othokomele, onethezekile nelineni elisha. Kukhona ne-heater yegumbi uma ufuna ukuphumula ebusika baseGoli.
4) Amagumbi okugeza
Indlu yokugezela ifakwe i-WC ejwayelekile kanye nobhavu wokugeza futhi igcwele amathawula amasha lapho ungena.
4.78 · 80 okushiwo abanye
Indawo yaseRosebank isiphenduka isizinda sebhizinisi namasiko edolobha futhi inokuningi esingakunikeza kulo lonke uhlobo lwesihambi. Itholakala eduze ne-CBD yomlando yaseGoli kanye ne-Sandton (ikhilomitha-skwele elicebe kakhulu e-Afrika kanye nesizinda somnotho wezwekazi), i-Rosebank inikeza amathuba amangalisayo uma kuziwa ekudleni, ekuzijabuliseni nasekuthengeni. Indawo ezungeze leli fulethi inempilo yasebusuku ematasatasa kanye nendatshana engeyona indawo yaseGoli eminingi kakhulu.
Inxanxathela yezitolo ezimbili ezidume kakhulu eGoli (inxanxathela yezitolo iRosebank kanye ne-@Zone Shopping Centre) ziphezulu nje ngomgwaqo (ngaphansi kohambo lwamaminithi angu-2). Le ndawo ineqoqo elimangalisayo lezindawo zokudlela kusukela kumaketanga okudla okusheshayo njenge-KFC ne-Burger King kuya kokuhlangenwe nakho okuphezulu kwe-culinary endaweni yokudlela ye-Firs ne-Marble. Izitolo ezinkulu zihlinzeka ngolwazi lokuthenga emigwaqweni ephezulu kanye nemakethe yezandla yase-Afrika etholakala eduze kwe-Starbucks.
Mina nomndeni wami sibize leli dolobha elihle njengekhaya lethu isikhathi esingaphezu kweminyaka eyishumi manje futhi sizokwazi ukuphendula noma yimiphi imibuzo ongase ube nayo mayelana nokuvakasha kwakho noma senze izincomo mayelana nezinto okufanele uzenze ngenkathi ulapha.
Ngihlala ngiwumlayezo osheshayo ngakho-ke uma unemibuzo mayelana nokufakwa kuhlu, indawo eseduze noma mayelana naleli dolobha elihle, ngicela ungibhalele futhi ngizokusiza.
Futhi sineqembu elithandekayo esizeni elizolwela ukuqinisekisa ukuthi unolwazi oluhle futhi unethezekile ngaso sonke isikhathi
Mina nomndeni wami sibize leli dolobha elihle njengekhaya lethu isikhathi esingaphezu kweminyaka eyishumi manje futhi sizokwazi ukuphendula noma yimiphi imibuzo ongase ube nayo may…
UPoonam Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Rosebank namaphethelo